राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै, गम्भीर निर्णय हुनसक्छ ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै, गम्भीर निर्णय हुनसक्छ ?
संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता तथा कुटनीतिक वृत्तसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । विभिन्न दलका नेता र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर परामर्श लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०८:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गर्नु भएको छ । सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान लागि बैठक डाकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता तथा कुटनीतिक वृत्तसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । विभिन्न दलका नेता र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर परामर्श लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
हिजो सोमबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सँग भेट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला सुनाउने अन्तिम अवस्थामा भएको यो भेटले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ ।
परिषद्का सदस्यसचिव तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने मंगलबार बिहान डाकिएको बैठक नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।